(Emelitere ikpeazụ On: 17/01/2020)
Ị nwere ike iru obodo ụgbọ okporo ígwè si n'ebe ọ bụla Italy, ma ọ bụ n'ihu, dị ka Switzerland na France. E nwere mgbe niile, elu-ọsọ ụgbọ oloko na-aga ọtụtụ ugboro kwa ụbọchị site na Milan na Rome, kamakwa site Venice. Ndị a njem lee ihe na-erughị awa abụọ, na ị na-ahụ ohere ịhụ ndị mara mma ugwu na ubi nke Italy.
Ya mere ị dị njikere na-enwe wine obodo na Europe? SaveATrain.com ga-enyere gị ga-esi ọ bụla obodo Europe, ngwa ngwa, ọnụ ala na na a ọnụ ọchị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/wine-cities-europe/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride ụgbọ oloko traintip Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly mmanya